Mahogany စက်မှုထွင်းထု vs လက်စွဲထွင်းထု - MiDond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / MAHOGANY စက်မှုထွင်းထု vs လက်စွဲပန်းပု
MAHOGANY စက်မှုထွင်းထု vs လက်စွဲပန်းပု
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-04-24 မူလ:ဆိုက်ကို
စင်ကြယ်သောလက်ထွင်းထုထားသောပရိဘောဂများသည် Mahogany ပရိဘောဂများ၏ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးကိုအမြဲဖော်ပြသည်။ မည်မှျပင်,စက်ထွင်းထုအလုပ်လုပ်ကြသည် မကြာခဏပေါ်လာရုံသာမက Mahogany ပရိဘောဂများ၏ပင်မဈေးကွက်ဖြစ်လာသည် Mahogany ပရိဘောဂများ၏အဓိကပြပွဲခန်းမများတွင် မကြာမီနှစ်များအတွင်းက။လက်ကြိုးသစ်သားကိရိယာများပါဝင်mini လက်ကြွေစက်,handheld polisher,diy ထွင်းထုဘောပင်စသည်တို့ကိုစသည်တို့
Tသူသည်ရိုးရာလက်တန်းပွဲတွင် Mahogany ပရိဘောဂများ၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကိုလျော့နည်းလာသည်iမကြာသေးမီကမကြာသေးမီနှစ်များ တဖြည်းဖြည်းနှင့်စံနှင့်အတူကြီးမားသောပရိဘောဂစက်ရုံများဖြင့်အစားထိုး။ ရိုးရာထုထည်နည်းပညာနည်းပညာကိုတဖြည်းဖြည်းကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့်ခေတ်မီကိရိယာများဖြင့်အစားထိုးသည်။ စက်ကိုထွင်းထုထားသောစက်သည်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကိုသာသိမ်းဆည်းရုံသာမကထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။ စက်ကိုထွင်းထုလုပ်ခြင်းသည် ပို. လူကြိုက်များသည်‘လက်နှင့်လုပ်သော’သူတို့ရဲ့အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များကြောင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော် Mahogany ကိုအမှန်တကယ်သိကျွမ်းသူများသည်ခြားနားချက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်နိုင်သည်။
2Dအကြား IfferenceMabineCarving နှင့်Hနှင့်Cဂုဏ်ပြု
Tသူသည်လက်ဖြင့်ထုထည်သည်လက်စွဲနှင့်အတူအခြေခံအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်ပါအလုပ်လုပ်တယ်n လုပ်ငန်းစဉ်။ ယခင်အဆောက်အအုံကြီးများနှင့်စက်ရုံများမှထုတ်လုပ်သည်။ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏ကားယစ်s ။ ထို့ကြောင့်လက်ထွင်းထုပရိဘောဂများသည်လက်ရာတွင်ပိုမိုလက်ရာသာစုဆောင်းနိုင်ပြီးစုဆောင်းနိုင်သည်။ လက်ထစ်၏အကြီးမားဆုံးခြားနားချက်မှာလေယာဉ်နှင့်တူးဖော်သည့်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်aတစ် ဦး oblique ထောင့် t, တောင်၏ပုံသဏ္ like ာန်ကဲ့သို့, အောက်ခြေတွင်ထိပ်နှင့်ကျယ်ပြန့်ကျဉ်းမြောင်း။
အပေြာင်းမူရင်းအလုပ်s ကိုကွန်ပျူတာပုံဆွဲဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပုံဖော်ထားသည်tသူသည်ထွင်းထုသောထုတ်ကုန်များကိုစက်output ကိုဖြစ်ကြသည်အလိုအလျောက်ထွင်းထုစက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာသပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်ယူနီဖောင်းများဖြစ်သည် not ကိုမဆိုကွဲပြားခြားနားသော။ ထို့အပြင်စက်တင်ထားသည့်နည်းပညာသည်တိကျစွာဆန့်ကျင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပွင့်လင်းသောလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သာသင့်လျော်သည်သစ်သားပန်းပေြာက်လေယာဉ်ပေါ်မှာ, ဒါပေမယ့်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးအကျိုးသက်ရောက်မှုသုံးဖက်မြင်ပတ်ပတ်လည်ထွင်းထုနှင့် multi-layer openworkသစ်သားပန်းပေြာက်၏‘ဌာနခွဲမှတဆင့်နှင့်ပင်စည်မှတဆင့်’ပုံကမှိုင်းခြင်းနှင့်သက်မဲ့ကိုကြည့်စေသည်။ဒိဗေဒeLectric Toolပါဝင်ပါသည်လျှပ်စစ် Stone Grinder,အသေးစားလေ့ကျင့်ခန်းစက်စသည်တို့ကိုစသည်တို့
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လက်ထွင်းထုခြင်းသည် ပို. နူးညံ့သိမ်မွေ့။ ဖန်တီးမှုဖြစ်သည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းအမှတ်မှာမျဉ်း၏အထူမအာမခံပါပင်ဒါကြောင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားကြည့်ရှုသည်။ မျက်နှာပြင်၏သိသာသဲလွန်စရှိပါတယ်uရွေးချယ်နိုင်သည့် nevenness အပိုင်း ယန်, yin ထွင်းထုသစ်သားပန်းပေြာက်နှင့်တစ်ဝက် yin နှင့်တစ်ဝက်ယန်း။ ဤနေရာတွင်ပြသထားသည့်အရာသည်လှုပ်ရှားမှုနှင့်တက်ကြွမှုနှင့်ပြည့်ဝသောတင်းမာမှုရုပ်ပုံများကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာမှုရှိသည်။
(2) အားဖြင့်ထိတွေ့Hနှင့်:ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း vs Concave-convex
အဓိကအားဖြင့်ကွန်ပျူတာနှင့်စက်မှုလယ်ယာစနစ်ဖြစ်သောစက်သည်အဖုံးအတိမ်အနက်ကိုအကန့်အသတ်ရှိသည်။ လှျင်ဟုတ်တယ်တို့ခြင်းedလက်နှင့်ထိုအရာသေတမ်းစာဖြစ်feလုံးတာပင်ပိုပြီးပြားချပ်ချပ်နှင့် convex ခံစားချက်ပိုမိုများပြားခြင်းနှင့်ခုံးခံစားချက်။ စက်ကိုထွင်းထုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ချောမွေ့သောဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်လေဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်. Tသူကတသမတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်အရမ်းပုံမှန်ပါ. ယင်းစပါးသည်ချောမွေ့ပြီးရိုးရှင်းပါသည်။
လက်စွဲကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၏လက်နည်းသည် ပို. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ လိုင်းများသည် undulating undulating နှင့်ဆန့်ခြင်း, ထွင်းထုခြင်း၏နက်နဲသောအရာသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးမညီမညာဖြစ်နေကြသည်။ ခြုံငုံပုံသည်သုံးဖက်မြင်မှုနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်, အထူးသဖြင့်သစ်ပင်စည်များနှင့်အမြစ်စသည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာဝတ္ထုများတွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အားသာချက်များကိုပိုမိုသိသာထင်ရှားသည်။ ထို့အပြင်လေယာဉ်မှထွက်သောသုံးရှုထောင့်ထွင်းထုသောဂရပ်ဖစ်အချို့ကိုလက်ဖြင့်ထွင်းထားသည်။ သူတို့ကအမြဲတမ်းစက်မှုထွင်းထုနည်းပညာဖြင့် simulated မဖြစ်နိုင်ပါ။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်သောစက်ထွင်းထုအလုပ်လုပ်ခြင်းများကိုသာဟုသာပြောနိုင်သည်‘ကုန်ပစ္စည်းများ’ထွင်းထုထားသည့်သခင်၏စေ့စပ်စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင်မွေးဖွားသောအကျင့်များကိုမှတ်ယူနိုင်သည်‘အနုပညာလက်ရာများ’.Eပရိဘောဂအပိုင်းအစများသည်မတူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖြတ်သန်းသွားသည်uစက်ရုံ၏စည်းဝေးပွဲလိုင်းထုတ်လုပ်မှု mode ကို roder ။ ကွန်ပျူတာဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကွန်ပျူတာထွင်းထုထားသည့်ကွန်ပျူတာနှင့်မတူသောတင်းပလိတ်များအရထုတ်လုပ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ပြီးစျေးကွက်တွင်တင်ထားသည်။
လက်ထွင်းထုခြင်းလက်ရာများသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ. Tဟေးအားလုံးအတူတူလက်သမားမှဖြစ်ကြသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုတ်လုပ်မှုအချိန်နှင့်အခက်အခဲများသည်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သောကြောင့်ပရိဘောဂအပိုင်းအစတစ်ခုစီ၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီသည်လက်သမား၏စိတ်,
စက်တင်ဝိုင်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသင့်တော်ဆုံး၏လျင်မြန်သောရှင်သန်မှုကိုလျင်မြန်စွာပိုမိုရှင်သန်နိုင်ကြောင်းငြင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ Mahogany ပရိဘောဂများ၏အဆင့်အတန်း subdivision သည်ရေနံစိမ်းနှင့်ရိုးရှင်းသောလက်ထွင်းထုပရိဘောဂများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့်လက်ရာမြောက်သောစက်ထွင်းထုပရိဘောဂများဖြင့်အစားထိုးရန်ဖြစ်သည်, ဘယ်အလိုတော်လဲအနိမ့်ဆုံးစျေးကွက်သိမ်းပိုက်ဆက်လက်။ စက်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုတွင်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်သည့်အရာသည်လက်ထွေပိုး၏လက်ရာမြောက်သောထုတ်ကုန်များဖြစ်ရမည်။It ကိုကျော်မရရှိနိုင်သည့်လက်မှုပုံစံနည်းပညာကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်from style ကိုလက်ရာနှင့်အလိုတော်Mahogany ပရိဘောဂများ၏ထိပ်တန်းစျေးကွက်ကိုသိမ်းပိုက်ပါ။DIY Multi tool ကိုပါဝင်ပါသည်Mini Polisher,Stone Grinder သေးငယ်တဲ့စသည်တို့ကိုစသည်တို့
လက်ကြိုးသစ်သားကိရိယာများ mini လက်ကြွေစက် handheld polisher diy ထွင်းထုဘောပင် DIY လျှပ်စစ်ကိရိယာ လျှပ်စစ် Stone Grinder အသေးစားလေ့ကျင့်ခန်းစက် DIY Multi tool ကို Mini Polisher Stone Grinder သေးငယ်တဲ့